राष्ट्रपति ज्यू! मलाई यो देशको नागरिक हुँ भन्न ला’ज लाग्ने अवस्था आयो,केही त बोल्नुस्’ – नेपाली सूर्य
October 28, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on राष्ट्रपति ज्यू! मलाई यो देशको नागरिक हुँ भन्न ला’ज लाग्ने अवस्था आयो,केही त बोल्नुस्’
अभिनेत्री गौरी मल्लले आफुलाई ल’ज्जास्पद समाजमा बाँचीरहेको बताएकी छन् । यो समाजमा यो देशको नागरिक भन्न ला’ज लाग्ने अवस्था आएको बताएकी छन्।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई इकित गर्दै भनिन्, उहाँले राष्ट्रपति भएर दुई कार्यकाल लिइसक्नुभयो तर खै राष्ट्रपतिले महिलाका लागि एक शब्द बोलेको उनको प्रश्न छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री मल्लले भनिन्, राष्ट्रपति कुनै दुरदराजको गाउँमा गएर एक पटक उभिदिए मात्र पनि धेरै प्रभाव पर्छ। खै उहाँले त्यसो मात्र गर्न सक्नु भएको ?
म यहाँ बसेर यति कुरा भन्न सक्छु त्यो राष्ट्रपतिको कुर्चीमा बसेर राष्ट्रपतिले मैले बोलेकै जति शब्द मात्र बोलिदिए कति प्रभाव पर्छ ? तर खै उहाँ बोलेको ? उनले भनिन्, कुर्चीमा बस्नका लागि मात्र बसेका कारण यस्तो भएको हो । उनले पदमा पुग्नेहरुले भिजन नै नलिएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएकी छन्।
हामी एक कलाकारले कुनै भूमिका निभाउनु पर्दा सबै स्कृप्ट पढेर भिजन पुरा गरेर मात्र त्यो पात्रलाई न्याय दिन सक्छौं तर देश परिवर्तन गर्न भनेर कुर्चीमा बसेकाहरुसंग नै भिजन छैन । अनि कसरी त्यो भूमिकालाई न्याय दिन सक्छन् । उनले अहिलेको दुई तिहाई सरकार सबैभन्दा फेलियर सरकार भएको टिप्पणी गरिन् । अन्तरवार्ताको अन्त्यतिर राजनीतिक विषयबस्तुमा सोधिएको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएकी हुन्।
वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको मृत्युको कारण ‘कोरोनाले फोक्सो ड्यामेज !’